Fananangana ny Sampana Fifohazana eto amin’ny Fiangonana Bethlehema Fanantenana METM Ankazomanga
19 novembre 2015 by mpiandraikitra	1 Comment
Ny satroboninahitra mari-panavotam-pirenena
Teny Fanolorana ny perikopa: Romana toko faha-8:1-39.
Mpanolotra: D.Bruno Rabarihoela.
* Teny mialoha .
Tamin’ny fotoan’andro, dia notendren’i Mama Volahavana Germaine Nenilava mba hisolotena azy sy hitondra ny hafatra avy amin’ny Tompo i Dadatoa Bruno Rabarihoela, mpanolotra izao Teny Fanolorana ny perikopa izao.
. Ity no teny nomen’ny Tompo tamin’ny fotoana nananganana ny Asam-pifohazana sy nanokafana ny Sampana Fifohazana teo amin’ny Fiangonana Betlehema Fanantenana METM Ankazomanga Antananarivo (novambra 1997).
. Ara-tantara sy araka ny firaketana eo am-pelatànana: ity perikopa Romana toko faha-8 ity no azo lazaina fa teny niverina be indrindra tamin’ireo teny nomen’i Jesosy tamin’ny alalan’i Mama Volahavana Germaine Nenilava ho an’ny asan’ny Fifohazana Tobilehibe Ankara-malaza. Tsy latsaky ny in-dimy ambinifolo no nanomezan’ny Tompo azy nandritra ny fotoana niasan’i Mama.
. Teny fanorenana ny fampianarana sy ny fitaizam-panahy eo amin’ny Fifohazana tokoa izy.
* Fanolorana sy Fanamarihana
– Ity toko faha-8 ity dia azo lazaina fa mandravona sy manorina ny voalazan’ny Epistily ho an’ny Romana manontolo.
– Teny fanorenana ny zotram-piainan’ny mino manontolo ny Romana toko faha-8, dia programam-pitaizam-panahy feno.
– Manan-karena dia manan-karena izy, ka tsara ny hisokajina ireo lafin-kevitra fonosiny ary ny hamaritana ny endriky ny drafitra izay firafetan’izy ireo.
* Ny epistily ho an’ny Romana raha fintinina
. Ny lohahevitry ny epistily ho an’ny Romana manontolo dia « ny Filazantsaran’Andria-manitra » (Rom.1:1).
. Nekena ho voalohan-daharana amin’ny epistily rehetra nosoratan’i Paoly izy noho izy manome ny famelabelarana feno indrindra mikasika foto-pampianarana kristiana, dia ny fiasan’ny « fahasoavan’Andriamanitra, antoky ny famonjena sy ny fanamasinana ary ny fanatanterahana ny olon’Andriamanitra, ny olona masina, ny mino ».
* Momba ny toko faha-8
. Ny lohateny: « Ny famonjen’i Kristy ny mino Azy, izay miantomboka amin’izao fiainana izao ary mbola hotanterahina ho mandrakizay »
. Ny votoatin-kevitry ny teksta: Andriamanitra manamarina sy mamelona ary mampandresy izay rehetra mino an’i Kristy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina.
. Ny asan’ny Fanahy Masina:
– manafaka amin’ny fanamelohana noho ny ota
– mandresy ny asan’ny nofo sy ny fahafatesana ka manome fiainana
– manangana ho zanak’Andriamanitra
– mifona ho antsika mba hanamarinana antsika
– mihazona amin’ny finoana sy ny firaisana amin’Andriamanitra
Raha akapoka: dia manorina ny finoana, mampahery ny finoana, mamapharitra ny finoana.
. Ny drafitra: satria teny manan-karena sy mivelatra amin’ny lafiny samihafa ity toko faha-8 ity, dia ilaina ny mahita ny fomba firafitry ny teksta sy ireo andinin-kevitra fonosiny.
I/ Ny fototra iaingana: ny fameloman’Andriamanitra: 1-13.
* Andriamanitra manamarina ao amin’i Kristy : 1-4.
* Tsy mandeha araka ny nofo ho amin’ny fahafatesana: 5-8.
* Fa mandeha araka ny Fanahy ho amin’ny fiainana: 9-13.
II/ Ny fisandratan’ny mino: 14-25.
* Ny sata maha-zanak’Andriamanitra: 14-17.
* Ny fiaretana amin’ny finoana, antoky ny fisandratana amim-boninahitra:18-25.
III/ Ny fandresen’ny zanak’Andriamanitra:26-39.
* ny fanamarinan’Andriamanitra ny olony: 26-30.
* ny fombàn’Andriamanitra ny olony amin’ny adiny: 31-34.
* ny fitiavan’i Kristy, antoka ho amin’ny fandresena mandrakizay: 35-39.
I/ Ny fototra iaingana: ny fameloman’Andriamanitra.
* Andriamanitra manamarina ao amin’i Kristy
1 Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy.
2 Fa ao amin’i Kristy Jesosy ny lalàn’ny Fanahin’aina no nahafaka ahy tamin’ny lalàn’ny fahotana sy ny fahafatesana.
3 Fa izay tsy hain’ny lalàna, satria ny nofo no nahalemy azy, dia vitan’Andriamanitra tamin’izy naniraka ny Zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin’ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin’ny nofo,
4 mba hahatanteraka ny fahamarinana ilain’ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo, fa araka ny Fanahy. * Tsy mandeha araka ny nofo ho amin’ny fahafatesana
7 satria fandrafiana an’Andriamanitra ny fihevitry ny nofo; fa tsy manaiky ny lalàn’Andriamanitra, sady tsy hainy akory izany.
8 Ary izay ao amin’ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon’Andriamanitra.
* Fa mandeha araka ny Fanahy ho amin’ny fiainana.
9 Fa hianareo tsy ao amin’ny nofo, fa ao amin’ny Fanahy, raha ny Fanahin’Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny Fanahin’i Kristy, dia tsy Azy izy.
11 Ary raha ny Fanahin’izay nanangana an’i Jesosy tamin’ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia Izay nanangana an’i Kristy Jesosy tamin’ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin’ny Fanahiny, Izay mitoetra ao anatinareo.
12 Ary amin’izany, ry rahalahy, dia mpitrosa isika – tsy amin’ny nofo anefa, ka ho velona araka ny nofo.
13 Fa raha velona araka ny nofo hianareo, dia tsy maintsy maty; fa raha ny Fanahy no amonoanareo ny asan’ny tena dia ho velona hianareo.
II/ Ny fisandratan’ny mino
* Ny sata maha-zanak’Andriamanitra
14 Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra.
15 Fa tsy nandray ny fanahim-pahandevozana ho amin’ny tahotra indray hianareo, fa nandray ny fanahin’ny zanaka natsangana, izay iantsoantsika hoe: Aba, Ray ô.
16 Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika.
17 Ary raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. * Ny fiaretana amin’ny finoana, antoky ny fisandratana amim-boninahitra.
18 Fa ataoko fa ny fahoriana amin’izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin’ny voninahitra izay haseho amintsika.
19 Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak’Andriamanitra;
21 sady nahazo fanantenana koa fa* izao zavatra ary rehetra izao aza dia hovotsorana amin’ny fahandevozana, dia ny fahalòvana, ho amin’ny fahafahana izay momba ny voninahitr’ireo zanak’Andriamanitra. [* Na: satria] 2
2 Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny;
23 ary tsy izany ihany, fa isika koa, na dia manana ny voaloham-bokatry ny Fanahy aza, isika aza dia misento ato anatintsika, miandry ny fananganan’anaka, dia ny fanavotana ny tenantsika.
24 Fa ny fanantenana no namonjena antsika; nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony; fa ahoana no mbola anantenan’ny olona izay efa hitany?
25 Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika, dia miandry amin’ny faharetana.
III/ Ny fandresen’ny zanak’Andriamanitra
* ny fanamarinan’Andriamanitra ny olony
26 Ary toy izany koa, ny Fanahy no mamonjy ny fahalementsika: fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataontsika; fa ny Fanahy no mifona amin’ny fitarainana tsy azo tononina.
27 Ary Izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny Fanahy, satria araka an’Andriamanitra ny fifonany ho an’ny olona masina.
28 Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo.
29 satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin’ny Zanany, mba ho Lahimatoa amin’ny rahalahy maro Izy.
* ny fombàn’Andriamanitra ny olony amin’ny adiny
31 Inona ary no holazaintsika ny amin’izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no hahatohitra antsika?
33 Iza no hiampanga ny olom-boafidin’Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy.
34 Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin’ny maty koa ka mitoetra eo amin’ny tanana ankavanan’Andriamanitra ary mifona ho antsika.
* ny fitiavan’i Kristy, antoka ho amin’ny fandresena mandrakizay
35 Iza no hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy? Fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra?
37 Kanefa amin’izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika.
39 na ny ambony, na ny ambany, na inona na inona amin’izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra izay ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika.
Dia ho amintsika rehetra sy ho amin’ny Fiangonana manontolo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika.Amena.
24 février 2016 at 10 h 02 min
Misaotra an’i Jesosy izahay ny amin’ny nananganany ny fifohazam-panahy tao @ fiangonana METM Betlehema Ankazomanga, ary koa ireo olona nampiasainy mba tamin’ny fananganana izany. Isaorana manokana i Mama, Dadatoa Bruno ary ireo ray amandreny, ary tsy hadino ireo Mpiandry miara-miasa nanokatra ny asa sy fampaherezana, napetrany hampijoro izany fifohazam-panahy izany.
ary hamarinin’i Jesosy fa tena izy tokoa no nanangana ary asany no atao ao mandraka ankehitriny izao, mba hamonjy fanahin’olona maro ary ho tonga hoamin’ny fibebahana avokoa ny olona rehetra mamonjy izany fotoana izany.